Dumarka lagu ceebeeyo dhillaynimo (Slut-shaming) – Kaasho Maanka
Tan waxaa lagu magacaabaa Slut-shaming (dumarka lagu ceebeeyo dhilaynimo).
Slut-shaming ama dhillonimo-ku-ceebayn waa markaad ku weerarto gabdhaha hab-dhaqankooda galmada – ha ahaato mid xiriir galmo ku jirta (sexually active) ama mid kale, si kastoo ay u yar tahay ficilka ay samaysay, waxaa loo tarjumi karaa laguna dhalleeceyn karaa “galmo xad dhaaf ah” (dhillonimo) – waana arrin ay bulshooyinku muddo dheer ka aaminsanaayeen haweenka.
Hadaba maxaa sababay arrinkan? Uguna dhacdaa haweenka kaliya?
Taariikhda oo dhan ficillada haweenka iyo xorriyadda galmada waxaa jaangooyay ragga iyo kooxaha diinta ee isku daya inay xukumaan jirka haweenka, iyagoo xaddidaya waxkasta oo dumarku xaq u leeyihiin hadday noqoto doorashooyinka khuseeya dumarka sida ka hortagga uurka, ilmo iska soo rididda iyo xoriyadda galmada.
Sidoo kale markay raggu ku ceebeyaan dumarka dhillaynimo waxay sii xoojinayaan farriinta iyo aaminsanaanta ah in jirka haweenka iyo xorriyadda galmadu ay tahay mid ay xukumaan raggu.
Waqtigan la joogo maaddaama adduunka qaybo badan oo kamida ay dumarku heleen xuquuqaha siyaasadeed, xorriyadda ay u leeyihiin in ay muujiyaan quruxda jidhkooda ama rabitaankooda ku aaddan jinsiga kale oo ay jebiyaan qawaaniintii duugga ahaa ee xaddidaysay hab-dhaqanka laga fisho dheddigga (feminine behaviour) ee horay loogu soo rogay ayaa sidoo kale waxaa kordhay ceebaynta dumarka ka tallaabsada xeerarkaas aa qornayn.
Inkastoo kacdoonaddii dumarka ee sinnaan raadiska ahaa ay horumariyeen nolosha dumarka, soona kordhiyeen fikradaha jinsi-yaqaanka ee ku saabsan hababka ay haweenku u dhaqmayaan iyo xulashooyinkooda galmada balse nasiib-darro dhaqamadaas fooshaxun ee hore wali ma cidhib gui’in. Tanina waa sababta in dumarka dhillaynimo lagu ceebeyo ay wali baahsan tahay. Sababta oo ah markii gabadha loogu yeedho dhilo waxaa loo dirayaa farriin aad u cod dheer: laguma qiimeeyo gabadha caqligeeda ama shakhsiyaddeeda balse qiimaheeda kaliya ayaa ku jira jirkeeda iyo galmadeeda.
QORMO LA XIRIIRTA: Gabadh inaad noqoto danbi kuma lihid, ceebna ma aha!
Slut-shaming waxay abuurtaa jahwareer maxaa yeelay waxay isku mar tooshka ku ifinaysaa qiimaha galmada dumarka halka ay sidoo kale dirayso farriinta ah in jirka dumarka iyo muujinta galmadu ay tahay wax laga xishoodo. Laga soo bilaabo marka gabadhu da’ yar tahay waxaa la baraa inay soo bandhigaan hab-dhaqanka wanaagsan ee laga fisho ‘dheddigga’, si ay u noqdaan ‘marwo’, ‘edeb iyo qurux’ leh. Waxaan barnaa in qiimahoodu ku salaysan yahay muuqaalkooda iyo heerkooda soo jiidashada ragga galmo ahaan. Laakiin markii ay gabdhahani koraan ee ay gaadhaan da’da ay rabaan muujinta quruxdooda iyo sahaminta galmada, waxay la kulmaan dhalleeceyn ka timaadda hareerahooda, ragga, warbaahinta, dhaqanka iyo diinta iwm taas oo si taban u saameysa noloshooda qaybna ka ah falalka isku dayga xakamaynta dumarka si guud iyo xorriyaddooda galmo si gaara.
Markaa… Sideen u joojin karnaa slut-shaming ka?
waxay u baahan tahay isbeddelo waaweyn oo xagga dhaqanka iyo qiimaha haweenka ee bulshada dhexdeeda. Marka la rabo in wax laga badalo fikrado soo jireen ah iyo qaab fikirka xun ee bulshadda waxay noqon kartaa mid adag gaar ahaan marka aragtiyadhaas iyo fikirradaasi yihiin kuwo lala qabsaday oo caadi u muuqda.
Laakiin waxaa jira ficilo muhiim ah oo aad qaadi karto si aad u beddesho fikradahan oo aad u hormariso dhaqanka si loo helo bulsho haweenku ku dhex ixtiraaman yihiin oo loola dhaqmo si sinnaan ku jirto.
Nasiib xumo bulshadeenna soomaalida slut-shaming waxay ka bilaabataa marka gabadhu xijaabka kaliya dhigto, isku-filnaato/nin ka madax-bannaanaato, waxbarasho heer sare raadsato, shaqo “rageed” qabato sida siyaasadda ama xittaa fanka.. iskaba daa warkeeda haddii gabadha afkeeda ka soo baxo wax la xiriira galmo ama lagu tuhmo inay jirkeeda u madax bannaan tahay, markaa innagu meel fog ayaynu taaganahay marka loo eego ereygani macnaha uu xanbaarsan yahay bulshooyinka kale ee inaga ilbaxsan dhexdooda.
ku ceebaynta Dumarka dhilonimada waxay gabdhaha Soomaalida 99%.9 ay ka dhigtay wax aan dareen lahayn oo Alwaax oo kale ah, waxaan halkaan ku qirayaa in aysan jirin hal gabar oo soomaaliyeed oo ninkeeda si bareer ah u soo aadi karta kana dhamaysan karta galmo,waaba ceeb in ay sida ninkii oo kale ay wax raadiso, waana u sharaf in ay ahaato qofka la soo doonto haddii ay rabto iyo haddii aysan rabin GALMO- Waxan la yaabay gabar lagu soo furay Ninkii iyada qabay markii ay kala hor martay shumintii raaxadii galamada ka horaysay, laguna ceebeeyey in ay Dhillo tahay oo ay… Akhri faalladan »
filaasuuf maxamed beer-Dilaacshe
horta marka diin ahaan laga eego ,gabadha waa ka xaaran arrimaha galmadu ilaa ay ka guursanayso oo ay helayso lamaan ay ku ag raxaaysato , laakiin in gabadh sii indho la`ana loogu tilmaamo waa dhiloyad waa danbi makbar ah ,waayo markhaati ayaay uu bahantahay arrinkan ,sii loo mari xaqeeda
Haweenka maxaa dhaxalka loogu dulmiyay?
Dulmiga haweenka lagu hayo hubka loo adeegsado waxaa ka mid ah meherka oo raggu aaminsan yihiin inay haweenka iibsadeen maadaama ay hanti kala bexeen. Gabadhu ma codsan iyadu in meher laga bixiyo si ay xaqqeeda u waydo mana jecla raallina kama aha inay guriga fadhido oo aanay wax baran ama shaqo tegin balse waa lagu qasbay inay guriga fadhido, markay yaraydna waxbarashada ayaa laga ilaaliyey si...
Goorma ayay laab la qaawiyaa danbi noqotay?
Goorma ayay noqotay laab la qaawiyaa danbi iyada oo saxaabada qaar kamid ahi bannaanka ku salaaxi jireen dumar ajaanib ka ah? arka aad fiiriso qaabka Diinta Islaamku ula dhaqanto labada jinsi ee labka iyo dhedigga waxaan waqti badan qaadanayn inaad aragto cadaadiska xooggan ee ay saarto dumarka iyada oo duudsiisa xuquuqdooda qaar kamida sida sinnaanshaha dhaxalka marar badanna tagri-fal iyo...
W/Q: Dhudi Cigaal 17th May 2020